N’afọ iri abụọ na ise na-abịa, amụma m | Martech Zone
Ọ bụ ihe ọ toụ iche n’echiche banyere ọdịnihu na ihe ọ ga-eweta. Nke a bụ nchịkọta nke amụma m…
Ndị na-ahụ maka kọmputa ga-agbanwe, ọkụ, obosara ma dịkwa ọnụ ala. Nke kachasị nke plastik, usoro nrụpụta ga-adị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala.
Mgbanwe nke ekwentị, telivishọn na kọmputa ga-ezu oke.
Gbọ ala na ụgbọ elu ka ga-eji gas arụ ọrụ.
Ike United States ka ga-enye site na icheku ọkụ.
Kọmputa ngwanrọ ga-apụ kpamkpam, dochie ya na Software dị ka Ọrụ. Kọmputa ga-enwe ihe nchọgharị na ngwa ntanetị nwere ike ịntanetị na nnukwu datastores.
Ikuku ga-adị ebe niile, yana ngwakọta agbanwe agbanwe… ịzụ ahịa na ikuku, ikiri ihe omume egwuregwu na ikuku, wdg.
Nhazi ngwa ga-agbanwe site na mmemme gaa ngwa ejiri rụọ ọrụ site na iji njirimara onye ọrụ.
GPS ga-adị ebe niile, a ga-ejikwa sistemụ ihe ọmụma ala iji soro anyị, ụmụaka anyị, ekwentị anyị, ụgbọala anyị, wdg.
Ngwa ụlọ ga-adị njikere na Internetntanetị, yana njikwa njikwa ngwa dị mfe site na weebụ.
Usoro mkpu na igwefoto ga-adị ịntanetị niile na ikuku, na-enye ndị ahịa na ndị ọrụ ihe mberede ohere ijikọ ma nyochaa nsogbu.
Sistemụ njirimara na-amata ga-agafe gafee mkpịsị aka, ihu, na nku anya - ma ga - eji ngagharị mepụta profaịlụ na ọkụ.
Kọmputa agaghị enwe akụkụ a na-agagharị agagharị maka ebe nchekwa (ọ nweghị draịva rotary, diski, CD ma ọ bụ DVD)
Ndi oru na egwu ha ga-enweta nkwekọrịta site na ụlọ ọrụ, metụtara egwu na ụdị. A ga-ekesa egwu n’efu.
Ngwaọrụ ntụgharị nkeonwe na ezigbo ndị ntụgharị asụsụ dijitalụ ga-adị maka nzukọ ma ọ bụ nzukọ vidiyo, na-eme ka asụsụ na olumba adịghị mkpa.
Ego ga-anọkarị na ndụ anyị kwa ụbọchị, kama anyị ga-eji ego elektrọnik.
A ga-achọpụta ngwaọrụ maka ịwa ahụ nke na-achịkwa anụ ahụ n'emetụghị ya aka.
Ndị ọchịchị mmegbu ga-anọgide na-ada n'ihi Internet na Global Economics.
Oghere dị n'etiti akụ na ụba na ịda ogbenye ga-ebelata mana agụụ na erighị ihe na-edozi ahụ ga-abawanye.
Okpukpe ga-ada ada n'ụzọ dị ukwuu ma bụrụwanye usoro nkwado ime mmụọ nke obodo.
Ntaneti gha abanye na uzo di iche iche, ahia, nke onwe, nke di nchebe, wdg.
Ngalaba aha ga-abụ nnukwu adịghị mkpa dị ka asụsụ ude search na ọdịnaya ude na-aghọ ndị a ma ama. Otutu mmadu agaghi eji ihe ntụpọ com ọzọ.
Ndị na - emepe emepe ga - agbanwe na ndị na - emekọrịta ihe bụ ndị ga - agbanwe na Logicians dị ka asụsụ kọmputa si bụrụ ihe a na - ahụkarị na ihe okike iji ọtụtụ ngwaọrụ wee dị mkpa.
Ogwe okirikiri ga - adị obere - sistemu nkwụnye ọkụ na - eme ka enwee ike karịa. Enweghị solder, enweghị waya, enweghị okpomọkụ… dị ka Legos.
Eserese nke echiche site na ọkụ eletrik na kemịkalụ ga-eme ka ọ banye na ọgwụ. Mmetụta nke ọgwụ ndị ahụ na ihe ọkụkụ ga-abịa ọzọ. Mkpụrụ ọgwụ agaghị adị ka ebe ọ bụ na ọgwụ niile ga-enwe ụzọ isi were mpaghara na enweghị nhụjuanya, ọgwụ, ma ọ bụ mgbaze.
Ọgwụ ga-agwọ oke ibu.
Ichere n’ezie na m ga-ekwu Udo Worldwa? Nope.
Tags: n'ọdịnihuna-ebu amụma banyere ọdịnihuAmụmaamụma teknụzụ
Nov 17, 2006 na 12:21 AM
Oooh… kpọọ MP3 na ekwentị! M chefuru otú ịtụnanya ihe mepụtara NKE ga-abụ [sarc].
Nov 17, 2006 na 12:07 AM
Erighị nri na-edozi ahụ? Da Ogbenye? Ebee ka Apple iPhone dị?
Dee 27, 2008 na 8: 26 AM
Aga m edozi naanị # 25.